Yiziphi izinhlobo izinhlawulo zokuphatha
Concept futhi izinhlobo izinhlawulo zokuphatha, ngokuvamile wezwakalisa kumthelela impahla noma yokuziphatha okonile. Ezinye isijeziso ukuhlanganisa futhi komkhawulo okwesikhashana amalungelo kanye nomthelela impahla, kanye ukulahlwa. Umthetho usungula izinhlawulo athize kwezokuphatha:
ekuthathweni imali atholwe ngenxa icala;
bokuhlukaniswa amalungelo akhethekile (ukuzingela noma ukushayela);
Khokha yokusungula izinto eziye abe yisisulu icala;
Uhlelo izinhlobo izinhlawulo zokuphatha: kudliwe
Ukuphuca into, okuyinto into eqondile noma insimbi icala, impatho oludlulele okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni isihloko yinkantolo ukweneka ubunikazi. Abathathiwe kungenzeka kuphela labo izinto, okuyizinto abaphuli ezizimele. kokuquleka ihlawulelwa liqukethe ukukhethwa ngempoqo ekwahlulelweni kanye ukugcwaliseka okwalandela yokudlulisela wabe ngayo umniniso wasekuqaleni.
Ocolekile isixwayiso njengoba izinhlobo izinhlawulo zokuphatha
Baxwayiswa ngokubhala. Kwezinye izimo ezibekwe ngumthetho, ke zingalungiswa nezinye izindlela zokuhlola ezasungulwa. Isijeziso - lokhu isigwebo zezimali, okuyinto ibekwa izikhulu kanye izakhamuzi ngokwephulwa e lemali kunqunywa imithetho.
Izinhlobo izinhlawulo zokuphatha: umsebenzi womphakathi futhi kwezimilo
Ingabe inkonzo yomphakathi ekufezeni isephulamthetho, khulula imisebenzi, izinhlobo zazo predetermined neziphathimandla zendawo. Abakwazi angabelwa amavesi athile ukuba izinkantolo isikhathi amahora 20 kuya ku-60 futhi ngeke ukukhonzwa hhayi ningi than 4 amahora ngosuku. Alinikeziwe umphakathi abantu abaletha babhekwa njengabantu abakhubazekile, abesilisa nabesifazane abaye sokumpeshena. Sebenzisa lokuqondisa izigwegwe izinyanga kuze kufinyelele ezimbili endaweni umsebenzi unomphela abantu abaye benza ukuhlukumeza, kanye ukuthi kubanjwe u-20% enzuzweni yabo ingqikithi. Aqokwe enkantolo yezabasebenzi kwezimilo.
Izinhlobo izinhlawulo zokuphatha: bokuhlukaniswa amalungelo akhethekile ukuboshwa
nokuswela osetshenziswayo kwelungelo ukuzingela iminyaka efinyelela kwemithathu for ukuhlukumeza ehlelekile noma bezakhamuzi ukuhleleka ukusetshenziswa kwalesi kwesokudla. Ngeke isetshenziswa izakhamuzi, elingafunwa ukuzingela liwumthombo oyinhloko okokuziphilisa. Bokuhlukaniswa amalungelo ishayelwa isetshenziswa isikhathi iminyaka efinyelela kwemithathu ngokwephulwa okuphindiwe noma bezakhamuzi ukuhleleka ukusetshenziswa noma isikhathi iminyaka engaze ibe yishumi ukwephulwa ehlelekile. avelelwe Administrative isetshenziswa kuphela ezimweni ezingavamile, ngokuqinisekile izinhlobo emacaleni isikhathi kuze kufike izinsuku ezingu-15. Lolu hlobo yibhange kuphela aqokwe enkantolo futhi ayikwazi isetshenziswa abantu abakhubazekile, abantu abantula gokweminyaka, abesifazane abanezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12, wakhulelwa.
Ukusebenza izinsuku ngonyaka - bangaki? Inani lezinsuku zokusebenza ngeviki futhi ngonyaka eRussia
Kungani ukuhlola igunya umuntu angene ukuthengiselana
Inhlangano ye-Interstate: incazelo yomqondo
Indawo yenkanyezi ku-epaulets. Omkhulu, induna, jikelele
Multivarka Brand 502: imanyuwali yomsebenzisi, i-review
Imimese egoqekayo Spayderko
Le filimu "Conan the iqaba" (2011): nabalingisi izindima
Izici yenhlangano kanye nomnotho kwamabhizinisi kanye ludwetshwa
Ultrasound kwezinso: ngaphandle ubuhlungu futhi ukulimala
Igiya Tactical: incazelo, inhloso, izici
Uhlelo ukuxilonga hard drive yakho: Ukubukeza engcono
Izimuncagazi, mollusk izibonelo. Yiziphi izinhlobo ziphila ngezinto esimila shellfish?
Scooter Stels Tactic - ewusizo kakhulu rover idolobha